Pakistan: waxaan xallin doonaa khilaafaadka wadamada Iran iyo Sacuudiga - Bandhiga Media
Jan12 January 12, 2020
Wasiirka arrimaha dibedda ee Pakistan ayaa lagu wadaa in uu booqasho ku tago magaalada Tehran ee caasimada Dalkaasi Iran maanta oo Axadda, booqashadii ayaa lagu soo waramayaa in ay ka hortagi doonto xiisadaha sii xumaneysa ee gobolka ka dib dilkii loo geystay Taliyihii Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan Qassem Soleimani.
dhowr sano, Pakistan ayaa isku dayaysay in ay dheellitirto xiriirka adag ee ay la leedahay Sacuudiga iyo Iran.
Booqashada maanta, ee wasiirka arimaha dibedda Pakistan, ayaa imaanaysa xilli magaalada Tehran ay ka socdaan Banaanbaxyo ay dhigayaan ardayda dhigata jamacadaha magaaladaasi, iyagoona ku eedeeyeenaya xukuumada Tehran, in ay wado been iyo Bala sheeg.
War ka soo baxay xafiiska arrimaha dibedda ee Pakistan ayaa lagu sheegay in horumarihii dhowaa ay khatar gelinayaan nabadgelyada iyo wanaaga gobolka durugsan.
Sidoo kale bayaanka ayaa lagu yiri: Shah Mehmood Qureshi waxa uu u gudbin doonaa Iran warqad ku xusan “Diyaar garowga Pakistan ee taageerida dhammaan fudeydinaya xallinta khilaafaadka iyo rabshadaha iyada oo loo marayo qaab siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed. Ka dib waxa uu la kulmi doonaa dhiggiisa Iiraan Mohammad Javad Zarif.
Wasiirka arimaha dibedda ee Pakistan, waxa uu booqan doonaa Sacuudi Carabiya 13-ka January, si uu wadahadal ula yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan.
Wasiirka ayaa sidoo kale booqan doona Mareykanka ka dib marka uu soo gabagabeeyo booqashadiisa Tehran iyo Riyadh, waa sida ay xaqiijiyeen ilo ku sugan xafiiska arrimaha dibedda ee Pakistan.
Sanadkii la soo dhaafay, Raiisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan waxa uu inta badan u safrayay wadamada Sacuudi Carabiya iyo Iiraan, taas oo ku doonayay sida uu u xasilin lahaa xurgufta ka dhexysa labada wadan.
Pakistan waxay xiriir wanaagsan la leedahay Sacuudiga, oo in kabadan 2.5 milyan oo muwaadin reer Pakistani ah ayaa ku nool kana shaqeeysta boqortooyada sacuudi carabiya, balse waxa ay sidoo kale Pakistan xiriir dhow la leedahay Iran waxayna u matashaa danaha qunsuliyadda ee Tehraan ee Mareykanka.
Ciidamada Xafter oo sheegay in ay u hogaansami doonaan heshiiska xabad joojinta Liibiya